येले सम्बत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत दिप प्रज्वलन कार्यक्रमकाे सुरुवात » PradeshReport.com
होम पेज » राष्ट्रिय » येले सम्बत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत दिप प्रज्वलन कार्यक्रमकाे सुरुवात
येले सम्बत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत दिप प्रज्वलन कार्यक्रमकाे सुरुवात
प्रकाशित : २८ पुष २०७८ १६:०३
पुस २८, २०७८ – किराँती नया वर्ष यलम्बर सम्बत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज दिप प्रज्वलन कार्यक्रम सुरु गरेकाे छ ।
धरान स्थित १७ साकेला पार्कमा अनावरण गरिएकाे यलम्बरकाे प्रतिमामा दिप प्रज्वलन गर्दै सबै किरातीहरुलाई दिप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेकाे छ । किराया सुनसरिकाे आयाेजना तथा किराया धरान १७ नं. वडा समितिकाे व्यवस्थापनमा गरिएकाे साे कार्यक्रममा ८२ वटा मैन बत्ती, ५०८२ अंकित मैन बत्ती बाल्दै दिप प्रज्वलनकाे सुरुवात गरिएकाे थियाे । किराया सुनसरिका अध्यक्ष राजेन्द्र राईकाे अध्यक्षता गरिएकाे कार्यक्रममा किराया सुनसरिकाे सल्लाहकार प्रकाश राईकाे प्रमुख अतिथि रहेका थिए । प्रमुख अतिथि राईले दिप प्रज्वलन गर्दै कार्यक्रमकाे उदघाटन गरिएकाे थियाे ।
नेपालकाे ऐतिहासिक सम्बत भएकाेले यलम्बर सम्बतले राष्ट्रिय सम्बतकाे रुपमा मान्यता पाउनु पर्ने अध्यक्ष राईले दाबि गरे । उनले यलम्बर सम्बत किरात समुदायकाे विशेष दिन भएकाेले सबै किराती समुदायलाई आज घरघरमा दिप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले यलम्बर सम्ता राईकाे मात्र नभएर सबै किरात समुदायकाे साझा हाे, यसलाई सबै नेपालीकाे साझा सम्बतकाे रुपमा स्थापित गर्न ऐकेबद्धता जनाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसै गरेर प्रदेश नामाङ्करण पनि राष्ट्रिय राजनितिक मुद्दा भएकाेले सबैले किरात प्रदेश नामाङ्कनकाे लागि पहल गर्न अध्यक्ष राईले आग्रह गरेका छन ।
त्यसैगरेर कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रकाश राईले यलम्बर सम्बत किरात राईकाे मात्र नभएर नेपालकाे ऐतिहासिक प्राचीन सम्बत भएकाे बताए । उनले किराया सुनसरिले गरेकाे कार्यक्रमकाे प्रशंसा गर्दै अब याे अभियान सबैकाे साझा भएकाेले सबैलाई ऐकेबद्धताकाे लागि आग्रह गरेका थिए । अहिले सतहमा प्रदेश नामाङ्करणकाे सवाल, यलम्बर सम्बतकाे सवाल किरात राईहरुकाे मात्र भन्ने कुरालाई चिर्दै सबै समुदायलाई सचेत गराउन आवश्यक देखिएकाे बताए । उनले प्रदेश नामाङ्कनकाे सवाललाई जाेड दिँदै विभिन्न जाति उपजातिमा जिभाजित भएता पनि किरात प्रदेशकाे सवालमा सबै एक हुनु आवश्यक रहेकाे बताए । यसै कार्यक्रम अन्तर्गत भाेली धरान १४ स्थित विजयपुर चाैकमा ८२ वटा बेलुन उडाउने कार्यक्रम रहेकाे छ । उक्त बेलुनमा १ नं. प्रदेश किरात र यलम्बर सम्बत ५०८२ लेखिएकाे ब्यानर राखि उडाउने कार्यक्रम रहेकाे आयाेजकले जनाएकाे छ ।
PrevPrevious१९औँ अन्नपुर्ण साँझ भव्यताका साथ सम्पन्न, सविन राई र पहेलो बत्ती मुनिको प्रस्तुती दम्दार
Nextयलम्बर सम्बत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अन्तर्गत आज विजयपुरबाट ८२ वटा बेलुन उडाइयोNext